Ndị na-emepụta ngwaahịa na ndị na-eweta ngwaahịa | China Ngwaahịa Factory
Alumina mma ntụ ntụ na-eme site na sodium calcined alumina ntụ site na-egweri na nhazi miri emi.
A na-eme atụmatụ maka launder ahụ dịka iwu ahụike na nchekwa dị na ojiji nke ndị na-ere ahịa gbasara ike nke ọla, ngwongwo nke ihe ndị na-adịghị mma na ihe gbasara ọla. Dịka ọmụmaatụ, ọsọ igwe na-agba ọsọ, nkwụsị abrasion na ihe ọkụkụ nke mkpuchi.
Ka ọ dị ugbu a, ahịa na-achọ nnukwu alloy nke dị elu na-arịwanye elu, ndị ahịa ikpeazụ nwere ihe dị elu ma dị elu na mma. N'ikwu okwu n'ozuzu, ụdị ụdị a maka aluminom dị elu na-etolite na-adịkarị mkpa, nwee ume dị elu, dịkwa mfe ịhazi. Ọchịchọ a na-achọ ịchụpụ alloy alloy dị ọcha na-achọwanyewanye.
Ọ bụ ụfọdụ ikuku nke inert gas (nitrogen ma ọ bụ argon) ma ọ bụ gas agwakọtara (argon-chlorine ma ọ bụ nitrogen-chlorine gas body) n'ime aluminom a wụrụ awụ, site na rotor na-agbagharị ma ọ bụ ọkpọkọ nke gas n'ime aluminom a wụrụ awụ n'ime obere egosipụta, na uniformly diffused na mmiri mmiri aluminom. A na-ekesa hydrogen dị na aluminom a wụrụ awụ na-arụ ọrụ na gas, ma ka gas na-ebili n'elu aluminom a wụrụ awụ, nzube nke iwepụ hydrogen na slag na-enweta.